အသည်းကွဲသူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားပဲ့တင်သံများ – Trend.com.mm
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်လာအောင် လူတွေကစွမ်းဆောင်နိုင်သလို လူတစ်ယောက်ကို ထားရစ်ခဲ့ဖို့လည်း မတွန့်ဆုတ်ကြတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အသည်းကွဲသူတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ ခံစားချက်တို့ကို Trend ပရိသတ်ကြီးလည်း နားလည်စာနာစေဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကို အချိန်က ကုစားနိုင်ပါစေ။
၁။ ကိုယ်ဟာ ကျန်ရစ်နေခဲ့မယ်မှန်း သိထားနေခဲ့တော့ သူ ထားရစ်ခဲ့လဲ အေးဆေးပါပဲ။
၂။ အသည်းကွဲတဲ့အချိန်မှာ ရည်းစားတစ်ယောက်တည်းထားတာထက် ရည်းစားနှစ်ယောက်ထားတာ ပိုပြီး ခံသာပါသေးတယ်။
၃။ သူနဲ့ လမ်းခွဲသွားတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ငါ့ရဲ့ အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကို ရှာဖွေဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။
၄။ ဂွတ်ဘိုင်ပါ။ နင်နဲ့ငါနဲ့ ထာဝရလက်တွဲဖို့ မသင့်တော်သေးလို့။
၅။ နင့်ရဲ့ အချစ်ကို စောစောစီးစီး နားလည်သဘောပေါက်လိုက်ရတာ ငါ ကံကောင်းလို့ပဲ။
၆။ ရပါတယ်…ငါ့ နှလုံးသားထဲကို ၀င်လာဖို့လဲ ငါ မဖိတ်ခေါ်ခဲ့သလို ထွက်သွားဖို့လဲ ငါ မနင်ထုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ထွက်မသွားဖို့လဲ ငါ့မှာ တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေ။
၇။ နင် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ လမ်း……. အဆုံးစွန်ထိ လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
၈။ ငါဟာ နင့် ဘ၀အတွက် ဆူးငြောင့်ခလုတ်သဖွယ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် ငါ့ကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပြီး နင် ထွက်သွားလို့ရပါတယ်။
၉။ ငါ အတတ်နိုင်ဆုံး ချစ်သူ့ဝတ္တရားကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။ နင် ငါ့ကို မရွေးချယ်ခဲ့လဲ ငါ ကျေနပ်ပါတယ်။ အဓိက နင် ပျော်နေဖို့ပဲ။
၁၀။ သူနဲ့ ချစ်သူရည်းစားဘ၀တုန်းက သူ့ကို ပျော်ရွှင်အောင် မထားနိုင်ခဲ့တာကိုပဲ ငါ ၀မ်းနည်းမိတယ်။
၁၁။ နင့် ဘ၀အတွက် ပျော်ရွှင်မှုရမယ်လို့ မင်းထင်ရင် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မင်းမှာ ရှိပါတယ်။
၁၂။ ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လဲ နှုတ်ဆက်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ တော်ကြာ ငါ ထပ်ပြီး မျှော်လင့်နေမိမှာစိုးလို့။
၁၃။ မမုန်းပါဘူး……။ သူ့ကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့ လူကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရအုံးမယ်။
၁၄။ ငါ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ နင့် လမ်း နင် မှန်အောင်သာ လျှောက်လိုက်ပါ။
၁၅။ ထွက်သွားပြီးရင် နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပါနဲ့တော့။ ရှေ့တည့်တည့်ကိုသာ အာရုံစူးစိုက်ပါ။
၁၆။ ဟုတ်ကဲ့……ငါ မငိုပါဘူး။ ငါ ငိုနေရင် နင် ငါ့ကို ဘယ်စွန့်လွှတ်နိုင်တော့မလဲ။
၁၇။ မျက်ရည်မကျတာ ၀မ်းမနည်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ နင့် အမြင်ထဲမှာ ငါဟာ အကျဉ်းတန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့။
၁၈။ ၀မ်းနည်းကြေကွဲတိုင်း ငြီးငြူငိုယိုနေမယ်ဆိုလျှင် ပျော်ရွှင်မှုက ကိုယ့်ဆီဘယ်လာရဲ တော့မလဲ။
၁၉။ အချစ်အတွက် ဘယ်တော့မှ သတ္တိမကြောင်ဘူး။
၂၀။ အခုချိန်မှာ နင် ငါ့ကို ပစ်မသွားဘူးဆိုရင် တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာ ငါ နင့်ကို ပစ်သွားမိမှာပါပဲ။
၂၁။ စိတ်ချ…… ငါ ကြေကွဲနေရတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေဟာ မင်း ပေးခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ပျောက်ကင်းအောင် အချိန်ပေးပြီး ကုသပေးပါလိမ့်မယ်။
၂၂။ အချစ်စက်ဝန်းထဲမှာ ကိုယ်မနာရင် သူနာမယ်။ သူမနာရင် ကိုယ်နာမယ်။ အချစ်စစ်နဲ့ မတွေ့သေးသရွေ့ပေါ့။
၂၃။ ရေအေးခွက်ထဲမှာ ရေပူလောင်းထည့်လိုက်ရင် ရေတစ်ခွက်လုံးပူပြီး လျှံကျလာသလို အချစ်မှာလဲ ခက်ခဲအတူ ပျော်ရွှင်အတူ ဖြစ်နေမှ ချစ်ခြင်းတွေ ခိုင်မြဲနေမှာဖြစ်တယ်။
၂၄။ ငါ နင့်ကို ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် နင့်ရဲ့ လုပ်ရက်တွေ ငါ့ကို ဘယ်လောက်ထိ အယုံကြည်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ ငါ စိတ်ဝင်စားနေတယ်။
၂၅။ ဟေး…..ဖြေးဖြေးနော်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိခဲ့ရင် ငါ့ကို သတိရပြီး နောင်တရမနေနဲ့အုံးလို့ မှာချင်တယ်။
၂၆။ နင်တောင် ငါ့ကို လမ်းခွဲဖို့ ၀န်မလေးခဲ့တာ ငါက နင့်ကို ဘာလို့ ဆွဲထားနေရမှာလဲ။
၂၇။ လမ်းမှာတွေ့ရင် ငါ့ကို နှုတ်မဆက်နဲ့နော်။ တော်ကြာ နင် ငါ့ကို ချစ်နေသေးတယ်လို့ ငါ သတ်မှတ်လိုက်ရင်တော့ နင် မလွယ်တော့ဘူး။
၂၈။ နင့် နောက်ကွယ်မှာ ငါ ဘယ်လောက်ဘဲ ပြိုလဲလို့မထမရပ်နိုင်ဖြစ်နေပါစေ … နင့် ရှေ့မှောက်မှာ ငါ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။
၂၉။ ကံတရားတောင်တည်မြဲမှုမရှိတာ။ ဒီနေ့ ဒီချိန်ထိ ငါတို့ အတူတူလက်တွဲလာနိုင်ခဲ့တာ ငါတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် အောင်မြင်မှုရခဲ့တာပဲ။
၃၀။ ငါ့ စာ ငါ့ ကဗျာတွေက ငါ့ အချစ်ကို သက်သေမပြပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် မင်းကို ချစ်တဲ့အချစ်တွေကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထာဝရသိမ်းဆည်းခွင့်ရခဲ့တာ ငါ ကျေနပ်တယ်။
၃၁။ ငါ့ကို ယုံပါ။ ငါ့ကို ချစ်ပါလို့ ငါမတောင်းဆိုခဲ့သလို ငါ့ကို ပစ်သွားပါလို့လဲ ငါ မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။
၃၂။ ချစ်သူရည်းစားဘ၀အခိုက်အတံ့လေးအတွင်းမှာ မင်းရဲ့ ကြင်နာယုယမှုလေးတွေကို ရခဲ့တာ ငါ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
၃၃။ မင်း ငါ့ကို “ချစ်တယ်” လို့ဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့ နေ့ကတည်းကစ ခုချိန်ထိ အဲ့ဒီ စကားလုံးဟာ ငါ့ နားထဲမှာ ကြားနေရတုန်းပဲ။
၃၄။ မင်းကို ချစ်ဖို့ ငါ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကတည်းက မင်းကို ငါ မုန်းဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး ချစ်သူ။
၃၅။ ချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမှ နောင်တရနေမယ်ဆိုလျှင် အချစ်ကို လက်မခံဘဲ တစ်ဘ၀လုံး ဒီတိုင်းပဲ နေသွားတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မယ်။
၃၆။ နင် မရှိလည်းငါ အထီးမကျန်ဘူး။ ငါ့ ဘေးနားမှာ သီချင်းတွေ ဂီတတွေ သူငယ်ချင်းတွေရှိပါသေးတယ်။
၃၇။ ငါ့ ဘေးနားမှာ အားပေးဖော်တစ်ယောက်လျှော့သွားတယ်ဆိုပေမယ့် ငါ့ကိုယ် ငါ ကြံ့ခိုင်လာပါတယ်။
၃၈။ နင် ပေးလိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကို ဒီထက်မက ပိုတန်ဖိုးထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားလေး ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ချစ်သူ။
လူတဈယောကျကို ခဈြလာအောငျ လူတှကေစှမျးဆောငျနိုငျသလို လူတဈယောကျကို ထားရဈခဲ့ဖို့လညျး မတှနျ့ဆုတျကွတတျဘူး။ ဒါကွောငျ့ အသညျးကှဲသူတိုငျး ဖွဈပျေါလရှေိ့တဲ့ ခံစားခကျြတို့ကို Trend ပရိသတျကွီးလညျး နားလညျစာနာစဖေို့ ဝမြှေလိုကျပါတယျ။ အရာအားလုံးကို အခြိနျက ကုစားနိုငျပါစေ။
၁။ ကိုယျဟာ ကနျြရဈနခေဲ့မယျမှနျး သိထားနခေဲ့တော့ သူ ထားရဈခဲ့လဲ အေးဆေးပါပဲ။
၂။ အသညျးကှဲတဲ့အခြိနျမှာ ရညျးစားတဈယောကျတညျးထားတာထကျ ရညျးစားနှဈယောကျထားတာ ပိုပွီး ခံသာပါသေးတယျ။
၃။ သူနဲ့ လမျးခှဲသှားတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့။ ငါ့ရဲ့ အခဈြစဈအခဈြမှနျကို ရှာဖှဖေို့ လမျးဖှငျ့ပေးလိုကျတာပဲ။
၄။ ဂှတျဘိုငျပါ။ နငျနဲ့ငါနဲ့ ထာဝရလကျတှဲဖို့ မသငျ့တျောသေးလို့။
၅။ နငျ့ရဲ့ အခဈြကို စောစောစီးစီး နားလညျသဘောပေါကျလိုကျရတာ ငါ ကံကောငျးလို့ပဲ။
၆။ ရပါတယျ…ငါ့ နှလုံးသားထဲကို ဝငျလာဖို့လဲ ငါ မဖိတျချေါခဲ့သလို ထှကျသှားဖို့လဲ ငါ မနငျထုတျခဲ့ပါဘူး။ ထှကျမသှားဖို့လဲ ငါ့မှာ တားပိုငျခှငျ့မရှိဘူးလေ။
၇။ နငျ ရှေးခယျြဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့ လမျး……. အဆုံးစှနျထိ လြှောကျလှမျးနိုငျဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။
၈။ ငါဟာ နငျ့ ဘဝအတှကျ ဆူးငွောငျ့ခလုတျသဖှယျဖွဈနခေဲ့တယျဆိုရငျ ငါ့ကို နားလညျအောငျ ရှငျးပွပွီး နငျ ထှကျသှားလို့ရပါတယျ။
၉။ ငါ အတတျနိုငျဆုံး ခဈြသူ့ဝတ်တရားကပြှေနျအောငျ ထမျးဆောငျခဲ့ပွီးပွီပဲ။ နငျ ငါ့ကို မရှေးခယျြခဲ့လဲ ငါ ကနြေပျပါတယျ။ အဓိက နငျ ပြျောနဖေို့ပဲ။
၁၀။ သူနဲ့ ခဈြသူရညျးစားဘဝတုနျးက သူ့ကို ပြျောရှငျအောငျ မထားနိုငျခဲ့တာကိုပဲ ငါ ဝမျးနညျးမိတယျ။
၁၁။ နငျ့ ဘဝအတှကျ ပြျောရှငျမှုရမယျလို့ မငျးထငျရငျ ရှေးခယျြပိုငျခှငျ့ မငျးမှာ ရှိပါတယျ။
၁၂။ ထှကျသှားမယျဆိုရငျလဲ နှုတျဆကျဖို့မမနေဲ့နျော။ တျောကွာ ငါ ထပျပွီး မြှျောလငျ့နမေိမှာစိုးလို့။
၁၃။ မမုနျးပါဘူး……။ သူ့ကို ပြျောရှငျမှုပေးနိုငျတဲ့ လူကိုတောငျ ကြေးဇူးတငျရအုံးမယျ။
၁၄။ ငါ တဈယောကျတညျးဖွဈပါတယျ။ နငျ့ လမျး နငျ မှနျအောငျသာ လြှောကျလိုကျပါ။
၁၅။ ထှကျသှားပွီးရငျ နောကျပွနျလှညျ့မကွညျ့ပါနဲ့တော့။ ရှတေ့ညျ့တညျ့ကိုသာ အာရုံစူးစိုကျပါ။
၁၆။ ဟုတျကဲ့……ငါ မငိုပါဘူး။ ငါ ငိုနရေငျ နငျ ငါ့ကို ဘယျစှနျ့လှတျနိုငျတော့မလဲ။
၁၇။ မကျြရညျမကတြာ ဝမျးမနညျးလို့ မဟုတျပါဘူး။ နငျ့ အမွငျထဲမှာ ငါဟာ အကဉျြးတနျသူတဈယောကျဖွဈသှားမှာ စိုးလို့။
၁၈။ ဝမျးနညျးကွကှေဲတိုငျး ငွီးငွူငိုယိုနမေယျဆိုလြှငျ ပြျောရှငျမှုက ကိုယျ့ဆီဘယျလာရဲ တော့မလဲ။
၁၉။ အခဈြအတှကျ ဘယျတော့မှ သတ်တိမကွောငျဘူး။
၂၀။ အခုခြိနျမှာ နငျ ငါ့ကို ပဈမသှားဘူးဆိုရငျ တဈနတေ့ဈခြိနျမှာ ငါ နငျ့ကို ပဈသှားမိမှာပါပဲ။
၂၁။ စိတျခြ…… ငါ ကွကှေဲနရေတဲ့အခြိနျမှာ သူငယျခငျြးတှဟော မငျး ပေးခဲ့တဲ့ ဒဏျရာတှကေို ပြောကျကငျးအောငျ အခြိနျပေးပွီး ကုသပေးပါလိမျ့မယျ။
၂၂။ အခဈြစကျဝနျးထဲမှာ ကိုယျမနာရငျ သူနာမယျ။ သူမနာရငျ ကိုယျနာမယျ။ အခဈြစဈနဲ့ မတှသေ့ေးသရှပေ့ေါ့။
၂၃။ ရအေေးခှကျထဲမှာ ရပေူလောငျးထညျ့လိုကျရငျ ရတေဈခှကျလုံးပူပွီး လြှံကလြာသလို အခဈြမှာလဲ ခကျခဲအတူ ပြျောရှငျအတူ ဖွဈနမှေ ခဈြခွငျးတှေ ခိုငျမွဲနမှောဖွဈတယျ။
၂၄။ ငါ နငျ့ကို ယုံကွညျခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ နငျ့ရဲ့ လုပျရကျတှေ ငါ့ကို ဘယျလောကျထိ အယုံကွညျပေးနိုငျမလဲဆိုတာကိုပဲ ငါ စိတျဝငျစားနတေယျ။
၂၅။ ဟေး…..ဖွေးဖွေးနျော။ အကွောငျးတိုကျဆိုငျမှုလေးတှရှေိခဲ့ရငျ ငါ့ကို သတိရပွီး နောငျတရမနနေဲ့အုံးလို့ မှာခငျြတယျ။
၂၆။ နငျတောငျ ငါ့ကို လမျးခှဲဖို့ ဝနျမလေးခဲ့တာ ငါက နငျ့ကို ဘာလို့ ဆှဲထားနရေမှာလဲ။
၂၇။ လမျးမှာတှရေ့ငျ ငါ့ကို နှုတျမဆကျနဲ့နျော။ တျောကွာ နငျ ငါ့ကို ခဈြနသေေးတယျလို့ ငါ သတျမှတျလိုကျရငျတော့ နငျ မလှယျတော့ဘူး။
၂၈။ နငျ့ နောကျကှယျမှာ ငါ ဘယျလောကျဘဲ ပွိုလဲလို့မထမရပျနိုငျဖွဈနပေါစေ … နငျ့ ရှမှေ့ောကျမှာ ငါ မားမားမတျမတျရပျတညျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါမယျ။
၂၉။ ကံတရားတောငျတညျမွဲမှုမရှိတာ။ ဒီနေ့ ဒီခြိနျထိ ငါတို့ အတူတူလကျတှဲလာနိုငျခဲ့တာ ငါတို့ရဲ့ ကွိုးစားမှုကွောငျ့ အောငျမွငျမှုရခဲ့တာပဲ။
၃၀။ ငါ့ စာ ငါ့ ကဗြာတှကေ ငါ့ အခဈြကို သကျသမေပွပေးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ မငျးကို ခဈြတဲ့အခဈြတှကွေောငျ့ ထှကျပျေါလာတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ထာဝရသိမျးဆညျးခှငျ့ရခဲ့တာ ငါ ကနြေပျတယျ။
၃၁။ ငါ့ကို ယုံပါ။ ငါ့ကို ခဈြပါလို့ ငါမတောငျးဆိုခဲ့သလို ငါ့ကို ပဈသှားပါလို့လဲ ငါ မတောငျးဆိုခဲ့ပါဘူး။
၃၂။ ခဈြသူရညျးစားဘဝအခိုကျအတံ့လေးအတှငျးမှာ မငျးရဲ့ ကွငျနာယုယမှုလေးတှကေို ရခဲ့တာ ငါ အတိုငျးမသိ ဝမျးသာမိပါတယျ။
၃၃။ မငျး ငါ့ကို “ခဈြတယျ” လို့ဖှငျ့ပွောခဲ့တဲ့ နကေ့တညျးကစ ခုခြိနျထိ အဲ့ဒီ စကားလုံးဟာ ငါ့ နားထဲမှာ ကွားနရေတုနျးပဲ။
၃၄။ မငျးကို ခဈြဖို့ ငါ ဆုံးဖွတျလိုကျကတညျးက မငျးကို ငါ မုနျးဖို့အတှကျ မဟုတျဘူး ခဈြသူ။
၃၅။ ခဈြဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီးမှ နောငျတရနမေယျဆိုလြှငျ အခဈြကို လကျမခံဘဲ တဈဘဝလုံး ဒီတိုငျးပဲ နသှေားတာအကောငျးဆုံးပဲဖွဈမယျ။
၃၆။ နငျ မရှိလညျးငါ အထီးမကနျြဘူး။ ငါ့ ဘေးနားမှာ သီခငျြးတှေ ဂီတတှေ သူငယျခငျြးတှရှေိပါသေးတယျ။
၃၇။ ငါ့ ဘေးနားမှာ အားပေးဖျောတဈယောကျလြှော့သှားတယျဆိုပမေယျ့ ငါ့ကိုယျ ငါ ကွံ့ခိုငျလာပါတယျ။
၃၈။ နငျ ပေးလိုကျတဲ့ ဒဏျရာတှကွေောငျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတရားတှကေို ဒီထကျမက ပိုတနျဖိုးထားသငျ့တယျဆိုတဲ့ အသိတရားလေး ပေးခဲ့တဲ့အတှကျ ကြေးဇူးပါ ခဈြသူ။